Hakanto Contemporary – Hakanto Contemporary (MG)
Hakanto Contemporary dia manandratra sy manohana ny famoronana eo amin’ny sehatry ny kanto ao Madagasikara.
Natokana hanomezan-danja ny harenan’ny kanton’ny vanim-potoana ankehitriny Malagasy, toerana mahaleotena ho an’ny mpanakanto, tsy hitadiavam-bola nisokatra ho an’ny be sy ny maro tamin’ny volana Febroary 2020.
Joël Andrianomearisoa no mpitantana ara-java-kanto, mirefy 300 m2 ny toerana ary ao Ankadimbahoaka, atsimon’Antananarivo no misy azy. Mandray anjara amin’ny fifanakalozana eo amin’ny sehatry ny kanto ao an-toerana sy iraisam-pirenena izy ary manamafy fa tokana sy manana ny maha-izy azy ny kolontsaina Malagasy.
Maimaim-poana ny fitsidihana ary misokatra ho an’ny rehetra. Hakanto Contemporary dia manolotra toerana ahafahan’ny mpanakanto sy izao tontolo izao mihaona sy mifanerasera.
Ankoatran’ny fampirantiana miaraka sy ny fampirantiana ataon’olon-tokana manandratra ny kanton’i Madagasikara dia manolotra toerana fiofanana natokana ho an’ny mpanakanto ihany koa ny Hakanto Contemporary ho fampitomboana ny traikefa sy hampandroso ny tetikasam-pamoronana manohana ny sehatry ny kanto Malagasy.
Ny Fonds Yavarhoussen no manohana an’ny Hakanto Contemporary noho ny fahatsapany fa andry lehibe ho an’ny fampandrosoana ny kanto sy ny kolontsaina ary mankahery hatrany ny taranaka mbola ho avy eo amin’ny sehatry ny famoronana.